Sidee loo ogaadaa maalmaha la soo xigtay? Raadi inta sano ee aad shaqeysay | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Sidee loo ogaadaa maalmaha lagu darey amniga bulshada?
Susana Maria Urbano Mateos | | Shaqada, Qorshayaasha hawlgabka
Si loo ogaado sanadaha tabarucaadka amniga bulshada, wax lama huraan ah waa in la ogaado waxa qiimuhu yahay iyo raadka uu ku jiro qofkasta gaar ahaan. Kahor intaadan bilaabin ogaanshaha waxa hawlgab qaaraan ah inay tahay inay taabato qof walba, waa inaad ogaataa in ugu yar ee wax ku biirin kara hawlgabkaas uu yahay 15 sano; taasi waa, qofku waa inuu ugu yaraan ahaa 15 sano oo noloshiisa si firfircoon uga qayb qaatay amniga bulshada.
Sidoo kale waa inaad ugu yaraan labo ka mid ah 15kii sano ee la soo dhaafay ku tabarucday sanadihii isla markiiba ka horreeyay waqtiga weydiiso hawlgab. Waa inaan sidoo kale tixgalino boqolkiiba inta saldhigga sharciyeynta in aan haysano iyadoo kuxiran sanadka aan kujirno. Tani waxay ku saleysan tahay tirada sannadaha tabarucaadka.
Ilaa 2019, tirada ugu yar ee sano Midka ay tahay in la qoro waa 35 sano iyo lix bilood
Sanadka 2020 iyo ilaa 2022 waxaa lagu qiyaasaa in tirada sanadaha tabarucaadu noqon doonaan 36
Sannadka 2023 iyo illaa 2026, tirada sannaduhu waa 36 sano iyo 6 bilood
Marka la gaaro 2027, tirada sanadaha waxay noqon doontaa 37 sano
Si kale haddii loo dhigo, kolba sannadaha ka dambeeya, tirada sannadaha tabarucaadka ah ee lagu kasban karo 100% hawlgabka ayaa sii kordheysa.
1 Imisa maalmood oo la soo xigtay ayaan haynaa?
2 Sida loo ogaado maalmaha ku darsaday Lambarka Bulshada
2.1 Talooyinka ku aaddan codsashada sannadaha ayaa gacan ka geystay Lambarka Bulshada
3 Marka lagu daro sanadaha waxtarka, waxaa kale oo muhiim ah in la ogaado xog kale
4 Haddii ay dhacdo in xog kasta aysan sax ahayn, maxaan sameeyaa?
5 Sida loo ogaado maalmaha la soo xigtay si loo codsado dheefaha
6 Ma jiraan shaqooyin aan liis garayn?
7 Muhiimadda warbixinta nolosha shaqada
8 Sida aan u aqristo nolosheyda shaqada si aan u ogaado maalmaha la soo xigtay
Imisa maalmood oo la soo xigtay ayaan haynaa?
Haa, dhawr sano ka hor BBVA waxay abuurtay sahamin taas oo qaybta badan ee dadweynaha la waydiiyey inay runti ka war hayaan inta ku qoran amniga bulshada iyo maxay ahayd khidmadda ugu dhow ee ay qaadi lahaayeen haddii ay dhacdo weydiiso hawlgab.
Dadka intiisa badani waxay yiraahdeen waxay si dhab ah u ogaayeen tirada sanadaha ay taxeenSi kastaba ha noqotee, markay tahay ogaanshaha goorta ay lacag qaadanayaan, ku dhowaad cidina ma garanaynin sida looga jawaabo inta ay la egtahay bixinta. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jiray dad aad u tiro badan oo tabarucaadoodu ka yaraayey 15 sano; xitaa markii da'da dadku ka weyneyd 41 sano.
Sida loo ogaado maalmaha ku darsaday Lambarka Bulshada
Ogow maalmihii aan soo sheegnay Waa lagama maarmaan in la ogaado inta ay tahay in aan ku darsano, waa in lagu xisaabtamo taas dammaanadda bulshada ayaa bil kasta dirta dhammaan xogta la cusbooneysiinayo sida olole lagu caawinayo shaqaalaha.
Xulashadaan waxaa u sii dheer, xoogaa ayaad awood u leedahay codsi ku soo gudbi internetka, sida loo diro codsi ku saabsan amniga bulshada iyada oo loo marayo barnaamijka. Si tan loo sameeyo, waa inaad madasha gal oo weydiiso warbixinta noloshaada shaqada taas oo sannadaha tabarucaadku muuqan doonaan.
Waxaad u baahan doontaa inaad macluumaadka shakhsi ahaaneed sida magacaaga iyo magacaaga iyo lambarkaaga xubinnimo, iyo sidoo kale emayl iyo lambar aqoonsi.
Kaliya hoosta, waxaad u baahan doontaa inaad geliso dhammaan macluumaadka la xiriira cinwaankaaga ka dibna, waa inaad gujisaa aqbalaadda.
Waqtigaas, xogta ayaa loo diri doonaa si aad u codsatid noloshaada shaqada.
Talooyinka ku aaddan codsashada sannadaha ayaa gacan ka geystay Lambarka Bulshada
Waa inaad dhammaystirtaa dhammaan aagagga ku calaamadeysan xiddigle, maadaama kuwan loo baahan yahay.
Hadday tahay waddo guud oo aadan haysan, waa inaad dhigtaa 0
Waa inaad gelisaa dhammaan xogta dalabka adigoon lahjad lahayn. Dhib malahan inaad khalad qalad u leedahay
en el Nooca Aqoonsiga, lambarka aqoonsiga waa in lagu daraa xarfaha; si kastaba ha noqotee, muhiim maahan in lagu daro xarfaha ama meelaha banaan marka la dhigayo.
Xulashada labaad waxay tahay inaad ku codsato lambarka taleefanka ee aad ka heli doonto bogga amniga: 901 106570. Adiga oo ka codsanaya warbixinta halkan, waxay toos ugu imaan doontaa gurigaaga qaab warqad ah.
Haddii aad haysato shahaadada dhijitaalka ah, waxaad kala soo bixi kartaa khadka tooska ah ee PDF-ga. Soo degsigan ayaa isla markiiba la samayn karaa oo kaliya macluumaadka qaarkood waa in la buuxiyo.
Ugu dambeyntii, waa la sameyn karaa ku soo dejinta xogta internetka ka dib amniga bulshada wuxuu na siiyaa marin u helka xogteena iyadoo loo marayo lambar sir ah oo SMS ah. Nidaamka noocan ah sidoo kale waa isla markiiba, si kastaba ha noqotee, si loo awoodo in loo dhammaystiro dhammaan tallaabooyinka, khasnadda guud waa inay lahaataa lambarka taleefankaaga oo la cusbooneysiiyay.
Marka lagu daro sanadaha waxtarka, waxaa kale oo muhiim ah in la ogaado xog kale
Sidii aan kuugu soo sheegnay bilowgii, marka lagu daro ogaanshaha tirada maalmaha aan ku darsanay, waxaa aad muhiim u ah inaan sidoo kale ogaanno xog kale si aan ugu awoodno howlgabnimadayada waqtiga qiyaasta. Xogtani ma aha mid ansax ah oo keliya si aan u ogaan karno hawlgabnimada aan qaadanno, laakiin si aan u ogaanno haddii ay dhacdo shaqo la'aan, inta ay le'eg tahay faa'iidada aan heli lahayn bil ilaa bil.
Haddii ay dhacdo in xog kasta aysan sax ahayn, maxaan sameeyaa?
Haddii ay dhacdo inaad ogaato in mid ka mid ah xogta ku jirta bogga amniga bulshada uusan sax ahayn, tallaabada xigta waa in wax laga beddelo xogta lagu yiri boggaaga. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon doontaa dammaanadda bulshada ka dib markaad aragto sixitaankaaga, ay go'aansato inay runti tahay nooc macluumaad oo sax ah iyo in kale.
Sida loo ogaado maalmaha la soo xigtay si loo codsado dheefaha
Si ka duwan hawlgabka, waayo inaad codsan karto shaqo la'aanta waa inaad xisaabi maalmaha la soo xigtay waana inaad heysataa ugu yaraan 360 maalmood.
Haddii ay dhacdo inaad ku guuleysan weydo inaad soo gaarto lacagtaan, waxaad weydiisan kartaa waa caawimaad yar oo loogu talagalay "Shaqada ayaa lumisay”Laakiin kiiskan, amniga bulshada waajib kuma aha inuu ku siiyo.
Caawinaadan labaad, waa inaad lahaataa tabarucaad ugu yaraan 90 maalmood haddii ay dhacdo inaad leedahay qoys kugu tiirsan ama 180 maalmood haddii ay dhacdo inaadan mid haysan.
Ma jiraan shaqooyin aan liis garayn?
Haa, waxaa jira shaqooyin qaarkood oo aysan jirin wax tabarucaad ah sidaas darteedna aan wax caawimaad ah loo heli karin. Shaqooyinkani waa shaqaalaha guryaha ama dadka shaqeeya, ee ah, kuwa iskii u shaqeysta. In kastoo haddii ay jirto a shaqo la'aanta shaqaalaha madaxa banaan, wuxuu leeyahay sharciyo qaar oo ay tahay in la daboolo si loo helo waxaana loo yaqaan "joojinta tabarucaadka waxqabadka".
Hadda, waxaan dooneynaa inaan cadeyno qodob muhiim ah, maalmaha tabarucaada waxaa loo isticmaalaa howlgab iyo dheefo labadaba, marka aad ayey muhiim u tahay in la ogaado labadaba, si kastaba ha noqotee, waa loo isticmaali karaa si is dhaafsi ah. Taasi waa, iyada oo maalmuhu wax soo kordhiyeen haddii ay ku baxeen markii loo adeegsaday lacag bixin ama nooc ka mid ah dheefaha, maalmaha hawlgabka hawlgabka lagu daro waxaa lagu tiriyaa sannado oo kuwaan looma dhammayn, taas macnaheedu waa, waxay ku ururayaan noloshaada oo dhan.
Labada xaaladoodba, aad ayey muhiim u tahay in la ogaado tirada guud ee sannadaha aad haysatay waxay tahay.
Muhiimadda warbixinta nolosha shaqada
Shaqaale badan ayaa leh WARBIXINTA nolosha shaqada si loo ogaado maalmaha ay horay u soo sheegeen. Shaki la'aan tani waa ikhtiyaarka ugu fiican iyo kan aan kugula talinay xagga sare; Si kastaba ha noqotee, waa inaad haysataa dhammaan xogta warqadda ku jirta sidaa darteed haddii ay dhacdo in cillad ku dhacdo xogtaada, waad dalban kartaa ama beddeli kartaa nooc kasta oo macluumaad ah oo ku jira warbixinta noloshaada shaqo. Dhammaan xogta aad halkaan ka hesho waa kuwo qiyaas ah oo xaalado badan, xogta waa la waayi karaa ama qaddarku kuma haboona 100%.
Warbixinta shaqaalaynta waa in had iyo jeer loo qaadaa qaab gebi ahaanba tilmaamaya si qof walba uu u helo fikrad qiyaas ah oo aan had iyo jeer u dhigmin 100%, laakiin had iyo jeer aad ugu dhow waxa aan rabno inaan ogaano.
Iyadoo ay sidaas tahay, ayaa xisaabinta dhabta ah ee maalmaha la taxayHad iyo jeer waa in lagu sameeyaa iyadoo loo marayo adeegga dadweynaha iyadoo la codsanayo waxtar ama kabid iyo dhammaan xogta dhabta ah ee ku jirta warqadda si aad ugu sameyso xisaabinta dhabta ah gacanta wakhti kasta.
Sida aan u aqristo nolosheyda shaqada si aan u ogaado maalmaha la soo xigtay
Markaad hesho nolol shaqo, waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelato inaad si sax ah u turjunto. Warbixinta nolosha shaqadu waxay u qaybsan tahay dhowr qaybood oo laga heli karo xogta shaqsiyeed ee qof kasta iyo lambarka sooshal sekuuritiga (hubi inay sax tahay). Waxaad sidoo kale hubin kartaa waxa uu yahay tirada maalmaha la soo xigtay aagga ay ku qoran tahay "wuxuu ka diiwaan gashan yahay nidaamka badbaadada bulshada maalmo" x "ah.
Waxyar uun ka hooseeya xogtaan, waxaad ka heli doontaa dhammaan waqtiyada aad naftaada siisay sare iyo hoose ee amniga bulshada, leh mid kasta taariikhda uu leeyahay iyo magacyada shirkadaha.
Haddii ay dhacdo inaad ogaato in macluumaadka qaar la la'yahay, waad codsan kartaa wax ka beddelkeeda, laakiin waa inaad haysataa waraaqaha muujinaya in aad runtii ka soo shaqeysay meesha maqan adigoo u diraya dukumiintiyada la iskaan ah, si amniga bulshada ay ugu soo dari karaan.
Iyo, miyaad ogtahay inta sano ee ay tahay inaad ku biiriso ururinta lacagta hawlgabka ee ugu yar? Halkan guji:
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Sidee loo ogaadaa maalmaha lagu darey amniga bulshada?
Muddo yar ka hor waxaan isku dayay inaan ka ogaado khadka tooska ah sannadihii aan wax ku soo kordhiyay SS (Nolosha Shaqada) Shahaadadayda Dijital ah oo aanan helin oo maanta buuggaagii cajiibka ahaa iyo jiffy-ka oo gujinaya "gala barxadda" "I hore u haystay! Aad baad u mahadsantahay Susana.
Jawaab José Vicente Pinilla
IMISA MAALMOOD AYAAN QORAY
Jawaab TOMAS FERNANDEZ CARRETERO
Waxaan rabaa inaan ogaado inta sano ee la i qoray, magacaygu waa felix vasco jimenez 75669356t
Ku jawaab felix vasco jimenez
iibinta magdalena segarra dijo
Sidee loo xisaabiyaa oo howlo noocee ah ayaan sameeyaa si aan u xisaabiyo maalmaheyga taxan ayaa ah (saacadaha x 8 loo qeybiyay x ????) Sidee qalliinku yahay? Mahadsanid
Ku jawaab iibinta magdalena segarra
Waad salaaman tihiin, 1055 maalmood oo tabarucaad ah, taasi waa, 2 sano, 10 bilood, iyo 21 maalmood, waa imisa hawlgabkaygu?
Ku jawaab María Eugenia Laba
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado waxa aan soo xigtay iyo waxa aan hayn karo tan iyo markii aan ahay 58 jir dhawr sanona aan soo xigtay e-maylkayga si aan uga jawaabo mangeles.marquez@dkvintegralia.org muchas gracias
Ku jawaab Mari angeles
Cafiska Canshuurta Spain
Ku dheji suumankaaga: xasillooni darradu waxay ku soo noqonaysaa suuqyada